Tutorial video 10 ho an'ity Krismasy ity izay tsy azonao adino | Famoronana an-tserasera
Krismasy dia fotoana mety hampiasana ny vokany. Ny sanganasa amin'ireto daty ireto, toy ny ohatra amin'ny Halloween dia mitaky artifice, loko, hazavana, nofinofy ary izany no antony maha-zava-dehibe ny Adobe Photoshop na Illustrator amin'ny fananganana sary, ny doka amin'ny doka ary arahabaina. Betsaka ny safidy sy ny safidy ahafahantsika mitodika mba hiala amin'ny tany misy ny foto-kevitsika. Azontsika atao ny manova ny toetrantsika manokana amin'ny lahatsoratray, amin'ny sary an-tsary ny endritsika na amin'ny fomba amam-panaingoana miaraka amin'ny karazana motif Krismasy. Androany aho hitondra amina safidy folo amin'ny endrika tutorial sy endrika video mba hahafahanao mampiofana ny fahaizanao sy manampy anao hampivelatra ny asanao amin'ity taona ity. Raha mitady fampianarana video ho an'ity Krismasy ity ianao dia mazava ho azy fa tena soso-kevitra ireo.
Ampahatsiahiviko anao koa fa tamin'ny taona lasa dia nanao compilation be dia be izahay niaraka tamin'ny horonan-tsary miisa 100 ary manararaotra mitadidy aho fa afaka miditra ao ianao avy eto. Raha misy karazana olana amin'ny fidirana amin'ireo horonantsary dia aza misalasala mamela anao hanome valin-kevitra eto amin'ity faritra eto ambany ity. Ankafizo izy ireo!
Ahoana ny fomba hamoronana kaonty Krismasy amin'ny Adobe Photoshop
Mamolavola background Krismasy
Hetsika Krismasy ho an'ny Photoshop
Mamolavola Karatra Noely amin'ny fomba tsotra
Vokatra krismasy (litera maivana)
Vokarin'ny Krismasy amin'ny alàlan'ny jiro
Vokatry ny taratasin'ny Noely nopotehina
Firaisana kanto ho an'ny krismasy
Vokatry ny hatsiaka ao amin'ny Adobe Photoshop
Vokatry ny mistery amin'ny Krismasy amin'ny Adobe Photoshop
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Tutorial video 10 ho an'ity Krismasy ity izay tsy azonao adino
trippyon dia hoy izy:
Misaotra Fran :)
Mamaly an'i tripiyon
Tongasoa ianao Pedro, asa tsara. Tratry ny KRISMASY!
marthi06marthi dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao Fran nametraka ny tutorial-ko!
Mamaly an'i marthi06Marthi
Tongasoa anao, Tratry ny fety!
Kris PSTutorials dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao nizara ny tutorial nataoko mba hahatratra olona maro kokoa! Mirary fety sambatra! ;)
Valio amin'i Kris PSTutorials